थप विधिहरू तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक लक्षित गर्न यातायात सम्बद्ध गर्न
by बेभर्ली सानो on 10 सक्छ, 2021
यदि तपाइँ एक अनलाइन संगठन चलाउनुहुन्छ, तपाइँले लक्षितको विश्वास गर्न यो केवल एक हुनु पर्छ यातायात। रैंकिंग दिनको हरेक मिनेट परिवर्तन गर्दछ र यो निर्भर गर्दछ यातायात तपाइँको साइट को लागी संचालित।
यहाँ अवस्थित खेलिएको सम्पूर्ण अवधारणा भनेको तपाईलाई आफ्नो साइट भ्रमण गर्न व्यक्तिहरू ल्याउन को लागी हो। उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने प्रतिक्रिया तपाईको लागि बढि आगन्तुकहरू पाउने मौका पाउने छन्। यसले थप संकेत गर्दछ यातायात तपाइँको अनलाइन वेबसाइट को लागी।
तपाइँसँग लक्षित गर्ने क्षमताको बारेमा बिभिन्न विधिहरू छन् यातायात तपाईंको साइटमा। ती मध्ये पोष्ट मार्केटिंग हो, तपाईंको पृष्ठमा HTML ट्यागहरूको उचित स्थापनालाई सुनिश्चित गर्दै, र त्यसपछि अरूहरूको ब्लग साइटहरूको बारेमा कुरा गर्दै। थप वर्णनको लागि, तल पढ्न जारी राख्नुहोस्।
कम लेख मार्केटिंग
पोष्ट मार्केटिंग अहिले सम्म लक्षित तपाईंको साइटलाई लक्षित आगन्तुक बनाउने प्रयास र मूल्या techniques्कन प्रविधि मध्ये एक हो। तपाईंको पृष्ठ अधिक उपयोगी छ, अधिक आगंतुक तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ।
के हुन्छ यदि तपाईंसँग आफ्नै सामग्री तयार गर्न को लागी प्रोफेन्सिटी छैन?
बसोबास गर्नुहोस् म कसरी मेरो ब्लगमा ट्राफिक टार्गेट गर्ने छु?
सम्भावनाहरू यो हुन सक्छ कि तपाईंसँग अर्को साइटसँग व्यवहार गर्न पर्याप्त समय नहुन सक्छ तपाईंको साइट र अन्य अनलाईन मुद्दाहरू चलाउनका साथै।
सबै को, तपाइँको प्राथमिक मुद्दा तपाइँको पृष्ठहरु मा तपाइँको पाठकहरु को गुणवत्ता सामग्री प्रदान गर्न को सक्षम हुनु हो। र तपाईंको हातमा प्रशासनिक र मार्केटिंग जिम्मेदारिको ठूलो सम्झौताका साथ, तपाईं अर्को काम ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न, तथापि, तपाईं ट्राफिक र नेतृत्व पूरा गर्न मा आफ्नो दिमाग राख्नु आवश्यक छ, तपाईं अर्को व्यक्तिको बाहिर करार गर्न सक्नुहुन्छ। सेवाहरू तपाईंको मार्केटिंग प्रोजेक्टलाई बढावा दिन। तपाइँ निरन्तर तपाइँको साइट को लागी घोस्टराइटर्स रोजगार लिन सक्नुहुन्छ।
अन्यको ब्लगको बारेमा छलफल गर्दै
अधिक यातायात प्राप्त गर्ने अर्को विधि अन्य व्यक्तिको ब्लग साइटहरू छलफल गर्ने तरीकाबाट हो। असंख्य व्यक्तिहरूले तिनीहरूको प्रदर्शन बुझ्नको लागि काम गर्न रोक्छन्। लोकप्रिय ब्लग साइट वेबसाइटहरूमा एक हेराइ राखेर र बौद्धिक छलफललाई छोड्नुहोस् जुन तपाईं मान्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ कुनै पनि विषयहरूमा, तपाईंको पोष्ट पढ्न चाहनेहरूले तपाईंको लिंकलाई पछ्याउन र तपाईंको बारेमा अझ बढी पत्ता लगाउन रुचि राख्दछन् जुन तपाईं बारे मा बुझ्नुहुन्छ। एक खास विषय जुन उनीहरूलाई चिन्ता गर्दछ।
HTML वा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा अरूको लागि थोरै टेक्निकल हुन सक्छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ कि तपाई सहि शीर्षक ट्यागहरू इनपुट गर्नुहुन्छ ताकि खोजी ईन्जिनहरूले तत्काल ती जानकारी देखाउँदछ जुन तपाइँको साइटको बारेमा के भरिएको छ। मेटाशब्द ट्यागहरू र मेटा वर्णनमा आवश्यक कुञ्जी शब्द र अभिव्यक्तिहरू समावेश गर्दछ।
तपाईले अहिल्यै बुझ्नुभएको हुनसक्दछ, तपाईको साइट को लागी यातायात लक्षित गर्न को लागी सरल छ कि तपाइँ महत्त्वपूर्ण कुराहरु को लागी बुझ्नु भएको छ। किन तपाइँ कुर्नुहुन्छ जब तपाइँ तपाइँको पृष्ठ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र्याङ्किङ्ग अब?
रैंकिंग दिनको हरेक मिनेट बदल्छ र त्यो तपाइँको साइट को लागी यातायात मा निर्भर गर्दछ।
यहाँ अवस्थित खेलिएको सम्पूर्ण अवधारणा भनेको तपाईले आफ्नो साइट भ्रमण गर्न व्यक्तिमा तान्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न विधिहरू छन् कसरी तपाईं आफ्नो साइटमा ट्राफिक लक्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। पोष्ट मार्केटिंग अहिले सम्म एक प्रयास गरीएको छ र तपाईंको साइटमा लक्षित आगन्तुकहरू बनाउने दृष्टिकोणहरू जाँच गरिएका छन्। तपाईले हेर्नुहुन्छ कि तपाई सहि शीर्षक ट्यागहरू इनपुट गर्नुहुन्छ जसले गर्दा खोजी ईन्जिनहरूले तुरून्त विवरणहरू देखाउँछन् जुन तपाइँको साइटको बारेमा के भरिन्छ।
दायर अन्तर्गत: सामाग्री रचना, लक्षित ट्राफिक, वेबसाइट पदोन्नति